Baahiyaha Feejignaanta Suuqgeyntu WAY Kordhinayaan, mana Yaraanayaan! | Martech Zone
Khamiis, Juun 20, 2006 Isniin, November 14, 2016 Douglas Karr
Intii aan maamuli jiray waaxda suuq-geynta tooska ah, waxaan u sheegi jiray macmiisha in waqtiga ay ku qaadan karaan dareenka rajada uu si toos ah ula xiriiray waqtiga ay ku qaadatay in laga socdo sanduuqa boostada illaa qashinka. Weli waxaan aaminsanahay inay taasi run tahay. Ma aqaano inaan aaminsanahay in dareenka macaamiisha uu hoos u dhacay sanadihii la soo dhaafay, maadaama suuqleyda fashilantay ay ka qeylinayeen, in kastoo.
Waxaan aaminsanahay in koritaanka dhexdhexaadintu ay macaamiisha u beddeleen feejignaan dheeri ah, oo aan ka yarayn. Halka aan ku aragno tani waa caan ka mid ah barnaamijyada sida Liiska Angie, Epinions, Blogging, Amazon Faallooyinka, Bulshooyinka onlaynka ah, iwm. Dadku waxay juhdi badan gelinayaan inay ka wada hadlaan wax soo saarka iyo adeegyada ay jecel yihiin oo neceb yihiin. Feejignaanta noocaas ah xitaa way ka muhiimsan tahay daawashada booska 60-labaad ee Superbowl. Waxaa jira ganacsi kobcaya oo ku duuban jawaab celinta macaamiisha.
Kulannada cabashooyinka ee macaamiisha waxay leeyihiin tiro badan oo taraafikada sidoo kale. Mid ka mid ah tusaalooyinka xiisaha leh ee fiirogaarka ah ayaa ah gelitaanka baloog halkaas oo qoraagu wax ku duubay oo uu ku dhajiyay isku daygiisa ah inuu baajiyo akoonkiisa AOL. Waxaa la helay boqolaal kun oo hits. Qiyaas nooca lacagta AOL ku bixin laheyd noocaas wanaagsan fiiro gaar ah! Immisa lacag xayeysiin ah ayaa ku luntay duubistaan ​​keliya?
Tusaale kale, David Berlind wuxuu duubay duubitaan uu wicitaankiisu ahaa 13-daqiiqo oo uu la socdo T-Mobile, cidda uu ka bixiyay (oo ka baxsan akoonkiisa caadiga ah) ee marinka wirelesska ee garoonka diyaaradaha oo uu awoodi waayay inuu xiriiro. T-Mobile way diiday inay soo celiso lacagtiisa.
Sida laga soo xigtay Warbixin cusub oo loo yaqaan 'Pew Report', boqolkiiba 8 dadka isticmaala internetka, ama qiyaastii 12 milyan oo qof oo waaweyn oo Mareykan ah, waxay leeyihiin baloog. Soddon iyo sagaal boqolkiiba dadka isticmaala internetka, ama qiyaastii 57 milyan oo qof oo waaweyn oo Mareykan ah, ayaa akhriya baloogyada - waana koror aad u weyn tan iyo deyrtii 2005.
Dulucda tani waa in macaamiisha dareenka ay sii ballaaranayaan, oo aysan qandaraasleynin. Si kastaba ha noqotee, feejignaantoodu waxay ka sii jeesanaysaa wax-soo-saarka ballaaran, xayeysiinta xasaasiga ah, iyo PR waxayna u jeesaneysaa bulshada iyo ereyga-afka.
Suuqgeeye ahaan, waa shaqadaada inaad barato sida loola macaamilo macaamiisha iyada oo loo marayo teknoolojiyadaan cusub iyo dhexdhexaadiyeyaasha. Haddii aad isku daydo inaad la dagaallanto iyaga, kaliya ma guuleysan doontid. Macaamiisha waxay bixinayaan feejignaan aad uga badan sidii ay awalba bixin jireen, iyagoo leh ilo ka wanaagsan kuwii ay waligood heli jireen.
Tags: dareenkafiiro gaar ahdhererka
Jul 26, 2006 markay tahay 11:21 PM
Waa tan tusaale kale oo weyn, kan kan ka socda TicketMaster:
Jul 27, 2006 markay tahay 3:16 PM
Iyo mid kale oo ka socda Bank of America!